योगसँगै हाइक - विकेन्ड - साप्ताहिक
हाइकसँगै योग तपाईंको रोजाइको विषय हो भने भोलि शनिबार सुवर्ण अवसर छ । सौर्य वेलनेस एन्ड योग सेन्टरले ललितपुरको चम्पादेवीसम्मको हाइकसँगै त्यहाँ काठमाडौंको दृश्या अवलोकन गर्दै योग गराउने भएको छ । अ वाक टु रिमेम्वर हाइक एन्ड योग शीर्षक दिएको यो इभेन्ट कीर्तिपुरस्थित अफिसबाट बिहान ८ बजे सुरु हुनेछ भने टोली योगअभ्यास गरी बेलुका ५ बजे फर्कनेछ ।
गर्मीको फेसन रनवे
गर्मीले काठमाडौं तताउने क्रममा काठमाडौंमा फेसनको सरगर्मी समेत बढेको छ । यो गर्मीको नयाँ फेसनलाई पारखीहरूमाझ प्रस्तुत गर्न शनिबार साँझ चिन क्लब काठमाडौंले समर फेसन रनवेको आयोजना गर्दैछ । राति ८ बजे प्रारम्भ हुने यो फेसन रनवे आइतबार बिहान ५ बजेसम्म चल्नेछ ।
साउथ इन्डियन फुड
तपाईं साउथ इन्डियन चलचित्रको त्रेजी हुनुहुन्छ ? दर्शक भएपछि तपाईं साउथ इन्डियन परिकारको पनि पारखी नहुने कुरै भएन ? यदि हुनुहुन्छ भने हायात रिजेन्सी होटल पुग्न सक्नुहुन्छ जहाँ साउथ इन्डियन खानाको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले बुधबारदेखि एक साताका लागि त्यस क्षेत्रका टिपिकल परिकार उपलब्ध
गराइदै आएको छ । होटल हायात रिजेन्सीमा दक्षिण भारतीय परिकार बेलुका ६ः३० देखि बेलुका १० बजेसम्म उपलब्ध हुनेछ ।
रेस्लिङ पारखीहरूलाई खुसीको खबर । शनिबार दिउँसो ३ बजेदेखि ८ बजेसम्म दशरथ रंगशालको दशरथ स्टेडियममा चर्चित रेस्लरहरू भिड्दैछन् । एक्सन स्पोर्टसले आयोजना गर्ने यो कार्यक्रममा केटाकेटीका लागि २ सय रुपैयाँ तथा ठूला मानिसका लागि ५ सय र १ हजार रुपैयाँ प्रवेश शुल्क तोकिएको छ । रेस्लिङको उक्त टिकट ई–सेवाबाट पनि खरिद गर्न सकिन्छ ।
हाइक फर नेपाल